Isamsung iya kuyiguqula intengiso ye-smartphone ngeetekhnoloji ezi-4 | I-Androidsis
Kule mihla idlulileyo sifunde ukuba iSamsung ilungiselela elungileyo kunye ne-in-display sensor yeminwe, enokuthi ivele kwi-Galaxy S10. Kwaye ayisiyiyo itekhnoloji kuphela i-Samsung ethetha ngayo, kodwa ukuya kuthi ga ngaphezulu ezintathu, ukongeza i-4, apho inotshi yentengiso iyakususwa..
Inotshi ngumbono wokuba u-Apple ufumene umnqwazi ophezulu ukuzama "ukwenza izinto ezintsha" kwinto ethile. Isithuba esishiyekileyo kwelinye icala nakwelinye apho abenzi boluvo beekhamera ezahlukeneyo bekhona. Umbono weSamsung kukususa inotshi ukuba ihambe kuyo yonke "iscreen" ishukumayo ukuya kwinto enokuba yeyiphi na ngaphambili kuyo yonke isikrini.
1 Isamsung iya kuguqula umhlaba we-smartphone
2 Iitekhnoloji ezi-4 zokutshintsha ii-smartphones
3 Sala kakuhle
Isamsung iya kuguqula umhlaba we-smartphone
USteve Jobs sele etshilo ngomhla wakhe: "Izinto ezintsha zahlula iinkokeli kubalandeli". Sisebenzisa amagama ambalwa ukusuka kolunye ubuchwephesha bobuchwephesha obutsha, sizifumana sithetha, njengoko kubonisiwe ngumfanekiso womzekelo okwabelwana ngawo yiSamsung uqobo, yeyiphi into enokuba yifowuni yokuba indawo yonke ephambi kwayo ibe yeyesikrini.
Ewe ulibale ngale mingxunya yeelensi zekhamera engaphambili, okanye izithethi, okanye ezo bezels ziya zisiba buthathaka; njengaleyo yeGPS S9 okanye iNqaku 9. Yonke into iya kuba siscreen sokutshintsha kakhulu amava omsebenzisi esiqhele kuwo yonke imihla.
Kwaye ngoku kuphakama umbuzo, cBaza kukwazi njani ukulungelelanisa ikhamera, izithethi kunye nesixhobo sokubamba iminwe ngezantsi kwesikrini? Ngeetekhnoloji ezi-4 ezibonakalise kwiintsuku ezidlulileyo eSouth Korea.
Iitekhnoloji ezi-4 zokutshintsha ii-smartphones
Zezi Iitekhnoloji ezi-4 ezineSamsung ufuna ukuguqula umphambili wee-smartphones:
I-FoD: ubuchwephesha benzwa yeminwe phantsi komboniso.
IUPS: Itekhnoloji yesenzi engezantsi kwesikrini apho kufakwe khona ikhamera.
I-HOD: Itekhnoloji yovakalelo lobuchule.
I-SoD: leyo eqinisekisa ukuba isandi siphuma kwiscreen.
Ngamanye amagama, sithetha ngomfundi weminwe kwiscreen uqobo, isithethi esigxunyekwe kwiqela lenjongo, itekhnoloji ephucula "ukuchukumisa" kwescreen kunye nenye zinikezelwe ukuskena ubuso; ngokuchanekileyo le inxulumene nekhamera.
Kuzo zonke, eyona inomdla kwaye iyodwa kukusebenza kweUPS, eya kukuvumela ukuba ubeke phantsi kwescreen Iskena kunye nekhamera. Ke ikhamera yangaphambili inokuba "ifihliwe" phantsi kwesikrini.
Ngokwazi kwakho, i Ii-sensors ziya 'kudada' phantsi kweglasi kuyilo olusisigxina ukuba ayizukuthintela "ukubonakala." Umfanekiso esabelana ngawo ubonisa oko sele kuthethiwe. Ukuba sijamelene nenyani ngetekhnoloji ye-UPS, sinokuthetha ngezixhobo ezinokuba sisikrini ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye.
Kukho abo bathanda iNotshi, kwaye kukho abo bayifumana nje eyona nto yoyikisayo eyenzelwe uyilo lwee-smartphones. Sele icacisiwe into yokuba sijongane nenguqulelo emsulwa de kufike inkqubela elandelayo.
Ibe yi-Apple kunye nomtya olungileyo we Abavelisi be-Android ababeke Ngomthambo oku kusebenza ngaphambili kuninzi lwezixhobo ezihambayo. Nangona kunjalo Isamsung kuphela kwento ethembekileyo a sukubeka inotshi ntoni, kwifowuni efana nePixel 3 ijongeka ibulala (enyanisweni, abafana bakaGoogle bazama ukuyifihla kwintetho yayo njengoko yayinjalo).
Ngoku, ukuba itekhnoloji ye-UPS ye-Samsung iyasebenza, ngokungathandabuzekiyo iya kwamkelwa lilo lonke ishishini, eliza kubona ngokufanelekileyo ukuphela koyilo lwenotshi kuzo zonke iintlobo zezixhobo eziphathwayo.
Okwangoku asazi I-Samsung izakuzibandakanya nini ezi teknoloji zintsha. Ngokwe-Samsung Mobile News, i-UPS iyavavanywa kwiiprototypes ezimbalwa kwaye ayinakufika de kube li-2020. Ngapha koko, inkampani yaseKorea sele itshilo ukuba i-Galaxy S10 iza kuza notshintsho olubalulekileyo kuyilo, i-Galaxy S10 yonke isikrini ngokwenene?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Itekhnoloji entsha ne-4 emitsha apho i-Samsung iyakususa inotshi kwintengiso